Khamiis, Jan 21, 2021-Joe Biden oo laalay go’aamo uu horay u qaatay madaxweyne Trump – LaacibOnline
January 21, 2021 Abdirisaaq	0 Comments
Khamiis, Janaayo, 21, 2021 (HOL) – Joe Biden madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ee maalintii shalay xafiiska loo dhaariyay ayaa xalay soo saaray go’aamo waaweyn oo uu ku laalayo tallaabooyin uu horay u qaaday madaxweynihii ka horeeyay ee Donald Trump.
Ga’oomada uu meesha ka saaray Mr Biden ayaa waxaa ka mid ah mamnuucidii afarka lagu tagi karo Mareykanka, ee dalalka qaar uu kusoo rogay madaxweynaha isaga xilka uu kala wareegay ee Donald Trump.
Donald Trump wuxuu Mareykanka ka mamnuucay dadka ka imaanaya dalal uu u arkay in ay keeni karaan khatar amni.
Talaabadan ayaa dalalka iyo dadka uu sida weyn u samaayeen waxaa ka mid ahaa Soomaaliya. arrintanna waxaa rajo yeelan doona dad badan oo qaxootinnimo u rajeynayay in ay ku aadaan Mareykanka iyo kuwo baasaboorka Soomaaliga ah ku safri kara.
Waxaa kale oo uu Biden mudnaan siin doonaa in uu Mareykanka ku celiyo heshiiskii isbaddalka Cimilada ee Paris.
Madaxweyne Trump ayaa isugu shalay taggin kana qeybgali munaasabadii caleemo saarka madaxweynaha cusub ee xafiiska kala wareegay Joe Biden, waxaana isaga iyo waliba qoyskiisa saacado ka hor ay ka huleeleen Aqalka Cad ee Mareykanka.
← Khamiis, Jan 21, 2021-Weerar lagu qaaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda ee gobolka Gedo
Khamiis, Jan 21, 2021-Taliyayaal loo xiray falkii xalay lagu dilay guddoomiyihii degmada Hodan →
Talaado, July 14, 2020-Gabadh caan ah oo uu dhalay Nelson Mandela Johannesburg oo ku geeriyootay
Khamiis, Oct 29, 2020-Maraykanka oo shaaciyay inuu Soomaaliya ka caawinayo xakamaynta ilaha dhaqaalaha Al-shabaab
Sabti, Oct 17, 2020-Dowladda Soomaaliya oo Talyaaniga la saxiixatay mashruuc lagu dhisayo Biyo xireenka Beledweyne